न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी
९४९ पटक पढिएको
उखानै छ ‘नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छ ।’ ३ वर्ष अघिदेखि समाजशास्त्रका नयाँ विद्यार्थी हामी रिसर्च गर्नभन्दा बढी रिसर्चका विषयहरू खोजी गरिहिँड्नु नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्नुजस्तै हो ।
समाजका विभिन्न पाटोहरूबारे जिज्ञासा जागिरहने । अभ्यासको लागि कुन क्षेत्रमा, कुन विषयमा, खोज अनुसन्धान गर्ने भन्ने निक्र्याेल गर्न भने गाह्रो । कसरी गर्ने भन्ने मेसो पत्ता लगाउन झन गाह्रो । विभिन्न विषयहरू खोजिन्थ्यो । क्षेत्रहरू सोचिन्थ्यो । फेरि केही छिनपछि टपिकहरू फेरिन्थ्यो । अध्ययनका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन्थ्यो ।
सोधखोज गर्दै जाँदा एउटी साथीमार्फत् महिला सहयोगी समाज नामको संस्था फेला प¥यो । जुन संस्थाले विभिन्न सामाजिक संस्था र सरकारी निकायहरूको दृष्टि नपुगेको क्षेत्रहरूमा कार्यरत महिलाहरूको हितमा काम गर्दाेरहेछ । हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रो कुरा राख्यौं । तपाईँहरू त्यस्ता महिलाहरूलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने माघ ७ गते एउटा कार्यशाला गोष्ठी छ त्यहाँ आउनुहोस् तर अरुलाई नभनी तपाईहरू दुईजना मात्र आउनु भनी संस्थाकी कर्मचारी कल्पना चौधरीले भनिन् अनि हाम्रो सम्पर्क नम्बर टिपिन् र कार्यक्रम स्थलको ठेगाना दिइन् । त्यसपछि हामी त्यहाँबाट बिदा भयौं ।
व्यग्र प्रतीक्षाबीच माघ ७ गतेको दिन पनि आयो । निकै उत्साहका साथ हामी सो कार्यशाला गोष्ठीमा सामेल भयौं । सो गोष्ठी ‘यौन तथा प्रजनन् स्वस्थ्य र अधिकार’ विषयक थियो । हाम्रो लागि समाजको नितान्त फरक पात्रहरूसँग बसेर जानकारी बटुल्ने नौलो अवसर थियो त्यो । जसका सहजकर्ताहरू थिए विनोद अधिकारी र रानु राउत ।
२० वर्षदेखि इटहरीमा म रहँदै बस्दै आए पनि गोष्ठीमा सहभागी महिलाहरू मैले कहिल्यै नदेखेका अनुहारहरू थिए । संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष बिमला मल्ल राउतबाट शुरु भएको परिचयको सेसनबाट पत्ता लाग्यो कि गोष्ठीमा सहभागी कम्तीमा १८ वर्षदेखि बढीमा ३५ वर्ष उमेरसम्मका महिलाहरू रहेछन् ।
सम्झना र मैले पनि कलेजको नामसहित आफ्नो परिचय दियौं । कार्यक्रममा विभिन्न सेसनहरू छुट्याइएको थियो । पहिलो सेसनमा प्रजनन् स्वस्थ्यका मुख्य विषयवस्तुमाथि छलफल थियो ।
त्यसमा पहिलो शीर्षक ‘परिवार नियोजन र मातृशिशु शिक्षा’ राखिएको थियो । सहजकर्ताहरूले परिवार नियोजनका बारेमा जानकारी गराए अस्थायी साधनहरू र तिनको प्रयोगबाट हुने फाइदा र असर बारेमा बृहत छलफल भयो । सहजकर्ताहरूले सबैलाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको वा थाहा भएको अस्थायी साधनबारे अनुभव र राय दिन अनुरोध गरे । सबैले परिवार नियोजनको अस्थायी साधनबारे आआफ्नो अनुभव र धारणा व्यक्त गरे ।
मलाई भने यो सेसनले आश्चर्यचकित बनायो । कारण थियो त्यहाँ उपस्थित अविवाहित भनिएका महिलाहरूले पनि निसङ्कोच अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने गरेको बताए । अझ हेर्दा मुस्किलले १९÷२० वर्षकी जस्तो लाग्ने लामो कोष तानेर गाजल लगाएकी पातली एकजना अबिवाहित केटीले २ वर्ष अघिदेखि सङ्गिनी सुई लगाउँछु र एड्स तथा यौन रोग नसरोस् भनी कण्डम प्रयोग गर्छु भनी । त्यो सुनेर मेरा आँखा र मुख अचानक चौडा भए । उनी विगत अढाइ वर्षदेखि इटहरी आसपासकै क्याबिन रेस्टुरेन्टहरूमा कर्ल गर्लको काम गर्दिरहिछिन् ।
कार्यशाला गोष्ठीको २ सेसनसम्म बसेँ । त्यसपछि जरुरी काम परेकाले सम्ंझनालाई त्यहीँ छोडी मनभरी कौतुहलताको हुण्डरी बोकेर पूरा कार्यक्रम अवधिभर बस्न नपाएकोमा छुकछुक मान्दै म बाहिर निस्कएँ ।
शहरमा भेटिने जुनसुकै भीडमा, जमातमा, सडक, चोक, गल्लीहरूमा हिँड्ने बटुवाहरूमा ती अनुहारहरू भेटिन्नँ, कहिल्यै देखिन्नँ । घरीघरी त ताजुब लाग्थ्यो यही शहरको कुन कुनामा अटाएका होलान् त ती रहस्यमय पात्रहरू जसको दुनियाँ सम्झिँदा पनि बिपनामै एँेठन हुन्छ ।
हजारौँ प्रश्नहरूको सुइरोले मस्तिस्क नै छियाछिया बनाउँछ । शरीरभर काँडा उम्रिन्छ । त्यस्तो घृणित पेशामा कस्तो रहरले लागे ? कि कसले बाध्य बनायो होला तिनलाई ? त्योबिना हातमुख जोर्ने विकल्प भेटेनन् कि भेटेर पनि गरेनन् ? यस्तो नारकीय जीवन कतिन्जेल जिउँछन् तिनले ? त्यसपछिका बाँकी दिनहरू कसरी काट्लान् ?
यो दुनियाँमा जहाँसुकै होस् तिनको इज्जत र प्रतिष्ठा त फोहोर नालीको पिँधमा पनि भेटिन्नँ । यसको जिम्मेवार वास्तवमा को हुन् त ? आम समाजमा अत्यन्त घृणाको नजरले हेरिने यौन व्यवसायमा कसरी प्रवेश गरे ? परिवारलाई जानकारी हुन्छ कि हुन्न तिनको पेशा र काम ? समाजमा तिनीहरूको तुलना सबै मानिसमा हुन्न ।
हे भगवान ! सम्झिँदै आङ जर्किन्छ । के तिनीहरूलाई सम्मानित जीवन बाँच्नको लागि आजसम्म कसैले कुनै पहल गरेका छन् त ? समाजमा पुनस्र्थापित हुने अवसर कसैले दिन सक्लान् ? यी प्रश्नले बारबार कोपर्दा बुद्घको समयको एउटा घटनाको सम्झना हुन्छ ।
जहाँ भिक्षु आनन्दसँगको एक रातको सङ्गतमा बेश्याको रूपमा बदनाम एक महिला भोलिपल्ट भिक्षुणीको रूपमा बुद्धको आश्रममा दिब्यज्ञान प्राप्तिको लागि प्रवेश गरेकी थिई । तर हाम्रो समाजमा खोइ कहाँ छन् त्यस्ता पुरुष ? जसले बेश्यालाई बुद्धमा बदले ।
बरु उल्टै राष्ट्रको जिम्मेवार पद र प्रतिष्ठामा पुगेकाहरूले नै पर्यटकीय शहरहरूमा रेडलाइट एरिया बनाउने अवधारणाहरू अघि सारेर हजारौ महिलाहरूलाई वेश्यावृत्तिजस्तो वैधानिक नर्कको दलदलमा होम्ने योजना अघि सार्छन् ।
यसको उदाहरणको रूपमा केही महिना अघि राजनीतिक रोड¥याम्पमा आफ्नै पार्टीसहित सर्वत्र विरोध खेपेका गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्बी सुब्बा गुरुङको पोखरामा रेडलाइट एरिया बनाउने प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ । जुन सेलाउन नपाउँदै सोही सर्कलमा घुम्नेहरूले योजना म्याप डिजाइन गरे ।
उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल र पोखरा पर्यटन अध्यक्ष चिरञ्जीवि पोख्रेल लगायतको न्यु प्याकेजमा आएको ‘पोखरा लाईक पटाया’ राल मोडलको ‘इन्जोय जोन’ को अवधारणालाई लिन सकिन्छ । जसका निम्ति प्रदेश नम्बर ३ ले डीपीआर तयारीको लागि ९ करोड बजेट नै विनियोजन गरेको हल्ला छ ।
हुन त स्त्री जाति सदियौंदेखि नै यो पितृसत्तामा पुरुषको साधनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । अझै कहिलेसम्म हुने हो त्यसको कुनै अनुमान छैन । दार्शनिक सुकरातको समयअघिदेखि नै महिलालाई मान्छेको रूपमा गणना गरिन्नथियो ।
‘प्रभुको निगाह हो। म महिला होइन पुरुष भएर जन्मिएँ’, सोक्रेटसको यो भनाइबाट थाहा हुन्छ कि त्यस समयका महिलाले कुन स्तरको जीवन बाँच्थे ? अगस्ट कोम्टे मिखाइल दुर्खिम, हर्वट स्पेन्सर, म्याक्स वेबरहरू जस्ता समाजशास्त्रका फोर फादर वा उद्भवकर्ताहरूले नै लैङ्गिक सम्बन्ध र अवस्थितिलाई व्याख्या गर्दा जैविकीय आधारमै महिला पुरुषभन्दा निम्न र कमजोर हुन्छ भनेका छन् । यसै कारण हमेशा महिलामाथि पुरुषको प्रभुत्व रहने गर्छ भनेका छन् । त्यो प्रभुत्व सम्पत्ति र सत्तामा मात्र नभएर यौन र यौनिकतामा पनि रह्यो र अध्यावद्यिक कायम रहेकै छ ।
त्यस समय स्त्री जातिले पुरुषको सम्पत्तिको रूपमा बाँच्नुपर्दथ्यो भने साधनको रूपमा अझै लाखौं महिलाहरू आफ्नो जीवन आहुति दिइरहेका छन् । अथवा दिन बाध्य बनाइँदै छ । अझै पनि पुरुषत्वले महिलालाई त्यो सतहबाट माथि उठाउन चाहँदैन । त्यो घिनलाग्दो दलदलबाट मुक्ति दिलाउन चाहँदैन । त्यसैले त बाध्य छन् वेश्यावृत्ति गर्न विश्वभर लाखौं महिलाहरू । बजारमा कुनै पनि कुराको माग हुन्छ र न त्यसको आपूर्ति गरिन्छ । वेश्यागामी पुरुषहरू नहुने हो भने न रहन्थ्यो वेश्यावृृत्ति न जन्मिन्थे वेश्याहरू । वास्तवमा मान्छे जन्माउने महिला हो भने वेश्या जन्माउने पुरुषहरू हुन् ।
केही समय अघि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको प्रमुखको रूपमा आएका डीएसपी विनोद शर्माले यहाँ हुने यौन व्यवसायलाई लाई सखाप पार्ने प्रयास गरे । यौन धन्दा चलाउनेमा नामुद केही होटल रेस्टुरा व्यवसायीहरूलाई झ्यालखानाको हावा खुवाए । यौन व्यवसायमा मुलुकमै बदनाम भएको इटहरीका बासिन्दाले केही राहत त महसुस गरे । तर त्यो लामो समयसम्म टिक्न पाएन र अहिले फेरि यो धन्दा फस्टाउँदैछ ।
हुन त उसबेला पनि समाप्त भएको त कहाँ थियो र ? केवल स्थानान्तर भएको थियो सेक्स मार्केट । स्थानान्तरित गरिएको थियो त्यहाँ बिक्री हुने वस्तु (महिला) जसको कुनै निजी र जिउँदो जिन्दगी हुँदैन । सिनो मानिन्छ तिनलाई । हुन त आखिर ती पनि मान्छे हुन् । तिनीहरूको पनि हुँदो हो मान्छे हुने मन, माया र सम्मान खोज्ने मुटु ।
इज्जत र प्रतिष्ठाको यति नीचो धरातलमा उभिएर बाँच्नु त मृत्युभन्दा दर्दनाक पीडा हो । यस्तो पीडा स्वेच्छाले त पक्कै रोजेनन् होला । जसलाई परेको बखत न प्रयोग गर्ने पुरुषले नै सहानुभूति दिन्छ न दुनियाँले नै शरण दिन्छ । बरु प्रयोगपश्चात लात मारेर भाग्छ । भद्र पुरुषको खोल ओढेर बाहिरी दुनियाँमा रवाफ जमाउँछ । यस्तैहरूको बोलवाला छ ।
अझ कतिपय पुरुषहरू त बाहिर महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको ढोल पिट्दै घरमा आमा, श्रीमती र छोरीहरूमाथि निरङ्कुश शासन गर्ने गर्दछन् । जान अञ्जानमा कतिपय महिलाले पुरुषको प्रेममा वशीभूत हुँदा समर्पणमा भएको सानो चारित्रिक भूलमा पनि आफ्नै प्रेमी नामको पुरुषबाटै र समाजबाट जीवनभर चरित्रहीन महिलाको संज्ञा पाउँछन् । त्यस्तै कतिपय पुरुष घरमा श्रीमती हुँदाहँुदै बहुस्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्दै, अनेकपल्ट वेश्यागमन गरेर पनि आफूलाई भने शुद्घको शुद्घै ठान्ने गरेको घिनलाग्दो सत्यहरू भेटिन्छ भने समाजले पनि उसलाई ‘बाघको छोराको हजार गुँड’ भन्दै सुध्याउने गर्दछ ।
समाजले नै भन्छ, ‘मर्दको दश ओटी ।’ वास्तवमा भन्ने हो भने यो पुरुषप्रधान समाजको एउटा विशेषता हो । लामो समयदेखि लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको लागि दक्षिण एशियामा सक्रिय भारतकी अभियन्ता नेत्री कमला भासिन भन्छिन्, ‘पितृसत्ता घरभित्र श्रीमती राखेर पनि बाहिर सेक्स खरीद गर्छ ।’ पितृसत्ताको चरित्रले नै सिर्जना गरेको हो यौन बजार जहाँ लाखौं महिलालाई वस्तुको रूपमा किनबेच गरिन्छ ।
आज मात्र होइन वैदिक कालदेखि नै महिलालाई अप्सराका नाममा यौनको साधनको रूपमा प्रयोग गरी बाध्यात्मक बन्धक जीवन जिउन विवश बनाइन्थ्यो । त्यहाँ उनीहरूको (अप्सराहरूको) भावना, प्रेम, परिवार, जीवनको कुनै कदर हुदैनथियो । न सम्मान र महत्व नै हुन्थ्यो ।
वेद पुराणहरूमा यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । अप्सरा मेनका र ऋषि विश्वामित्रको प्रेमपछिको गृहस्थी जीवन छोडेर स्वर्ग फर्किन बाध्य हुनुलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । तरिका र स्तर मात्र फरक हो त्यो पनि एक प्रकारको यौनदासता नै हो । स्वर्गका अनेकौँ अप्सराहरूको बाध्यात्मक वैदिक कहानीहरू साक्षी छन् । नेपालको राजदरबार, राणा दरबारमा ल्याइने नानी (दासी) हरूको जिन्दगीमा दरबारियाहरूको यौन उन्मादले डामेको अनेकौं कहालीलाग्दा कथाहरू समय गतिले पछि छोडेको कमजोरहरूको अलिखित कथा बनेर विलीन भइसके ।
हालसालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पोखरा ट्रोल नामको पोस्टमा देखिएको तस्बिरले पोखराजस्तो शहरमा गोप्य रूपमा सञ्चालित यौन व्यवसायमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्यायो । तर सो व्यवसाय सञ्चालनमा प्रयोग गरिने यौनकर्मीहरूको वर्तमान र भविष्यबारे कसैले गम्भीर चिन्तन गरेको पाइँदैन । बरु उल्टै पोखरामा रेडलाइट एरिया स्थापना गरी पर्यटकहरूको लागि इन्जोय जोनको अवधारणा प्रदेश प्रमुखहरूले अघि सारेका छन् ।
थाहा छैन त्यो इन्जोय जोन कति छोरी चेलीहरूको ह्युमन लाइफको इन्डिङ् जोन हुने हो ? यो एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म महिला मान्छे होइन वस्तु हो भन्ने पितृसत्ताको खुला विधानमै घरघरमा गरिने व्यवहारको मसीले प्रष्ट तोकेको छ ।
अहिले यहाँ मात्र होइन विश्वभर महिलालाई यौनसाधन बनाई प्रयोग गर्ने अनेक सिलसिला, तरिका र प्रचलन तथा प्रथाहरूको सिर्जना गरियो । अहिले थाइल्याण्ड यसको भीषण मारमा परेको छ । सन् १३५१ पछिको ५ सय वर्षसम्म थाइल्यान्डमा महिलालाई पशुसमान खुला रूपमा किनबेच गरिन्थ्यो अधिकतम यौनका लागि भने न्यूनतम प्रजनन् र गुलामीका लागि ।
सेक्स क्यापिटलको रूपमा विख्यात थाइल्याण्डबारे बैंकक पोस्टले गरेको एक लंगीचुएल रिसर्चअनुसार त्यहाँ १९६० सम्म यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता थियो । राज्यद्वारा कतिपय वेश्यालय सञ्चालित थिए । अझै पनि राज्यको कुल राजस्वको ६० प्रतिशत आम्दानी पर्यटनबाट प्राप्त हुन्छ भने पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा भने यौन पर्यटनबाट सङ्कलित हुन्छ ।
तर थाइल्यान्डमा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा भने राज्यले अति न्यून बजेट छुट्याउने गरेको रिपोर्ट थियो । तर हाल आएर त्यसमा वृद्धि गरी महिलाहरूलाई यौन व्यवसायबाट रिटर्न गर्ने प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ तर राज्य कुनै हिस्सामा फसेको यौन ब्यापार भए पो त्यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ । देह व्यापारको दलदलमा फसेको राज्यलाई उकास्नु प्रशान्त महासागर थुन्नु जस्तै छ । यता ‘पोखरा लाइक पटाया’ इन्जोय जोनको अवधारणा नेपालको त्यस्तै भास निर्माणको शुरुवात नहोस् ।
कुमालेको चक्र हो समय । थाहा छैन कसको समय कहाँनेर दोहोरिन्छ र कसको समय कहाँनेर सकिन्छ । जीवनलाई जोयफुल बनाउने क्रममा को कति लुटिन्छ को कति भुटिन्छ यो त चक्रवर्ती समयले नै बताउला । तर घट्नुको सट्टा दिनहँु बढ्दै गइरहेको यौन व्यवसायले समाज र राष्ट्रलाई नै दूषित त पार्छ नै तर त्यो भन्दा बढी आधा आकाश भनेर गणना गरिने कति नारीहरूको जीवन कहिल्यै संग्लिन नसक्ने गरी प्रदूषित बनाइन्छ र तिनलाई ढलमा मिसाइन्छ त्यसको अनुमान लगाउन सकिन्नँ ।
इन्जोयको नाममा वेश्यागमन गर्ने पुरुष र वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य बनाउने यौन व्यवसायीहरूले यसलाई माइनस गर्दै नलगे यो भन्न सकिन्नँ कि तिनका पछिल्ला पुस्ताहरू पनि देहव्यापारको पसल थापेर पेटको भोक शान्त पार्न बाध्य नबनून् ।
एकदिन आफ्नै सन्तान दरसन्तान त्यो पेशामा आबद्ध हँुदाको कल्पनाले कस्तो हुन्छ ? त्यो महसुस गर्नुस् र वेश्यावृत्तिलाई निर्मूल गर्न यौन व्यवसाय र वेश्यागमनलाई बन्द गर्नुस् । अनि न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी ।